Video mampiaraka: ChatRoulette - Watch, zap, chat, sy ny surf
Video mampiaraka: ChatRoulette — Watch, zap, chat, sy ny surf
Fantatrao ve ny fitsipiky ny chatroulette? Izany dia chat sehatra mametraka anareo eo amin’ny fifandraisana tsapaka amin’ny alalan’ny fandefasana hafatra eo noho eo, na webcam. Nohariako sy nataoko malaza noho ny fandrakofan’ny fampahalalam-baovao amerikana-dehibe, ny foto-kevitra ny amin’ny chat roulette, antsoina koa hoe hiresaka kisendrasendra, ary efa nandresy ny tanora rehetra manerana izao tontolo izao. Izany fitsipika izany ny immediacy, miaraka amin’ny vintana efa mba hahita ny talenta, tena virtuosos ny mozika. Video mampiaraka manome anao izany fomba sendra tojo, miaraka amin’ny hiresaka kisendrasendra tena tsotra sy mora ny hianatra, ary izay mitaky fotsiny ny minitra alohan’ny hivoahan’ny amin’ny fifandraisana amin’ny kisendrasendra olona. Raha ny amin’ny chat roulette dia afaka mampiseho ny sasany amin’ireo mombamomba ny tena tsara ny andro, fa koa nanasongadina ny tafahoatra ny fitsipika. Tahaka ny tsy fantatro hoe iza no ao ambadiky ny fakan-tsary, ny sasany fifandraisana dia mahafinaritra kokoa noho ny hafa. Izany no mahatonga ny Lahatsary mampiaraka dia natokana ho an’ny taona. Matetika izany no nilaza fa tsara tarehy indrindra fihaonana dia kisendrasendra.
Mba hamela ny olon-drehetra mba hifandray amin’ny olona iray, raha tsy misy mihitsy ny mifidy, ary aoka ny herin’ny maizina niasa. Be dia be mahafinaritra kokoa noho ny amin’ny chat nentim-paharazana, Video mampiaraka miantehitra amin’ny fitaintainana izay miantso ny maro indrindra. Mifandray ny mpampiasa manerana izao tontolo izao, dia afaka sivana amin’ny firenena raha te -«mandeha»na hijanona kokoa ny»an-toerana». Manana ny fahafahana mifandray amin’ny olona manerana izao tontolo izao. Ny sasany mampiasa ny amin’ny chat roulette mba haneho ny tena tsara ny andro. Isika rehetra dia tsarovy ity ho toy ny tanora ny tanora, amin’ny prodigy ny pianô. Ny hafa mampiasa izany mba hahatonga antsika mihomehy, dia mampita ny fifaliana sy ny toe-po tsara.
Ary isaky ny fifandraisana, ny mahagaga dia miandry anao
Raha tsy fantatsika hoe iza isika, dia tsy ho lavo, indraindray ny loza dia manan-danja. Mba hisorohana ny ratram-po, ny herisetra, hiresaka kisendrasendra Lahatsary mampiaraka dia voatokana ho lehibe ny olona. Tsy ho diso fanantenana ianao raha ataovy ratsy ny fivoriana.
Afaka zap izany haingana ao amin’ny manaraka mombamomba azy
Maro ireo ao turniglove, tsy ny kely indrindra amin’ireo mpampiasa aterineto, ary miandry eo amin’ny fifandraisana amin’ny kisendrasendra olona. Ny isan-karazany fiaviana, amin’ny isan-karazany ny tombontsoa izay mety ho anao.
Ahoana no ahafantarana raha miezaka